တောင်ကိုရီးယား ရဲ့ Design Revolution ကိုသာ ဆက်လက် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ 2022 Kia Sportage ! – MyMedia Myanmar
တောင်ကိုရီးယား ရဲ့ Design Revolution ကိုသာ ဆက်လက် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ 2022 Kia Sportage !
Hyundai လိုပဲ Kia ကုမ္ပဏီ ဆိုတာဟာလည်း သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်သမျှ ကားတွေကို ပျင်းစရာ ကောင်းတဲ့ အသွင်အပြင်တွေ မရှိတော့ အောင် ဒီဇိုင်း ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ L5Sedan နဲ့ ရောင်းအား အတော် လေး ကောင်းမွန်နေတဲ့ Telluride တို့လို ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြောင်းလဲ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ကားတွေရဲ့ အရေအတွက်တွေက သက်သေ ပြလျက် ရှိ နေတာပါ။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမား ရှိလာနိုင်တာ ကတော့ Kia Sportage ပါပဲ။ မကြာ သေးမီကပဲ မြင်တွေ့ထားရတဲ့ Spy Shots တွေ နဲ့ Realistic Renderings ‌တွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရတော့ အဆိုပါကားဟာ လက်ရှိ မော်ဒယ် ကနေ သိသိ သာသာကို ပြောင်းလဲကွဲထွက် သွားမယ့် သဘောကို မြင်နေရပါတယ်။
Render အသစ် မှာ ဆိုရင် 2022 Kia Sportage ကို ပုံဖော်ပြသထားပြီး SUV တွေကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်လို့ ရသေးတယ်ဆိုတဲ့ နောက် ထပ် ဒီဇိုင်းပိုင်း အတွေးအခေါ် တစ်ရပ်ကိုတောင် ချပြလိုက်တဲ့ သဘောကို မြင်တွေ့ နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ပုံရိပ်ကတော့ ကားရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ၃ ပုံ တစ်ပုံ လောက်ကိုပဲလိမ္မော်ရောင်နဲ့ ဖော်ကြူးထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံ တည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ တစ်ပုံ တည်းမှာ ကို ပဲ ယခင် တုန်းက မြင်တွေ့ ခဲ့ရပြီးတဲ့ Sportage အသစ် ရဲ့ Render နဲလည်း အတော်လေး တူညီနေတာတွေ့ရပြီး Angular Headlights Cluster တွေ ကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားမှာ ဖြစ်ကာ အတော်လေးထင်ရှားတဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ LED Daytime Running Lights ‌တွေကိုလည်း မြင်ရ ဦးမှာပါ။ အဆိုပါ Running Lights တွေကို မြင်ရတာကတော့ Kia K5အသစ် ရဲ့ Aggressive ဖြစ်တဲ့ ပုံကို ပြန်လည်အမှတ်ရလိုက်စေ တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခု ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးတဲ့ သူ‌ကတော့ Kia ရဲ့ Logo အသစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားပါ သေးတယ်။ ကားရဲ့ ဘေးဘက်တွေမှာ တော့ မြင့်တက်နေတဲ့ အသွင်အပြင်ပိုင်းနဲ့ အတူ Beltline ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပြီးတိကျတဲ့ Rear Haunches တွေ ကြောင့်လည်း ကားကို ပိုမိုပြီး လေးနက်တဲ့ အသွင် ဖြစ်သွား စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလက်ရှိ မော်ဒယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ C Pillar အပါး ဒီဇိုင် ကိုပဲ မြင်‌ တွေ့ ရ ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ Grille အပိုင်းကတော့ ကြည့်ရတာ လိုတာထက် ပိုနေသယောင် ထင်ရပေမယ့် တကယ်လို့ အနည်းငယ် ပါဝင် မှုကို လျှော့ချလိုက်မယ် ဆိုပါက လက်ရှိ Sportage ထက် တော်တော်လေး သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံစံကို ပုံဖော်ပေးမှာ အသေအချာ ပါပဲ။ အဆိုပါ ကားအသစ်ရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းကို ခန့်မှန်းရမယ် ဆိုရင်တော့ 2022 Hyundai Tucson နဲ့ မျှဝေသုံးစွဲ လာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး 2.5 Liter Smartstream Gas Engine ပါဝင်လာနိုင်ကာ 1.6 Liter Turbocharged Gas Engine ကိုလည်း လျှပ်စစ် မော်တာတစ်လုံးနဲ့ ပေါင်းစပ်လာနိုင် ပါသေးတယ်။
အဆိုပါ အင်ဂျင် ကတော့ Tucson အသစ်မှာဆိုရင် 226 hp နဲ့ 258 lb-ft Torque အထိ စွမ်းဆောင် ထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Tucson မှာလိုပဲ Front-Wheel Drive နဲ့ All-Wheel Drive စနစ် တို့ကို ထုတ်လုပ် ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အဆိုပါ ကိုရီးယား ကားကုမ္ပဏီ အနေနဲ့တော့ တိုးတက် လာတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် အခုမျိုးဆက်သစ် Sportage ဟာလည်း Crossover အပိုင်း ထဲမှာ ကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်မှုကို ထပ်ဆောင်းပံ့ပိုး ပေးမယ့် ကားတစ်စီး အဖြစ် ဆက်လက် မျှော်လင့် ရနိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
The post တောင်ကိုရီးယား ရဲ့ Design Revolution ကိုသာ ဆက်လက် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ 2022 Kia Sportage ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-14T17:00:46+06:30January 14th, 2021|MYCARS MYANMAR|